LibreOffice 7.1.3 yasvika ichigadzirisa zvinopfuura zana zviputi | Linux Vakapindwa muropa
Ingopfuura mwedzi mushure vhezheni yapfuura, Iyo Gwaro Sisekelo rine zvakare kukanda yekugadzirisa yekuvandudza yehofisi yako suite. Ndezve LibreOffice 7.1.3, boka remahofisi ekushandisa izvo kubvira v7.1 yauya kuzotakura zita reCommunity Edition kana yeruzhinji edition. Seye poindi yekuvandudza, izvo zvakaunzwa kwatiri zvauya kuzoita kuti Munyori, Calc, Dhirowa, Impress, Math uye Base zvive zvakavimbika.
Pamwechete LibreOffice 7.1.3 yakagadzirisa gumi nembiri, iyo iyo 25% yakaunzwa kuvandudza kuenderana neMicrosoft Office mafomati .docx, .pptx uye .xlsx, pakati pevamwe. Mushure mekutaura newaunoshanda naye pamusoro peizvi, chokwadi ndechekuti kuenderana kwakakosha, asi, kunyangwe zvichinatsiridza nekutanga kwega kwega, ndinofunga kuti, kana vakatikumbira gwaro mune imwe yeaya mafomati, chinhu chakachengeteka chinogara chiri chekushandisa Microsoft Office. Ndinovimba ndakakanganisa mune ramangwana.
LibreOffice 7.1.3 haisati yakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira
Zvekare zvakare, Iyo Gwaro Sisekelo rakatora mukana wekutiyeuchidza izvozvo pane vhezheni yemakambani nezvakakosha mabhenefiti senge rutsigiro rwuri nani kana maficha anodiwa, asi kune akajairika mushandisi, suite inoramba iri bhizinesi senguva dzose Musiyano chete, uye ini handizive kana kuuti "chaiyo", ndeyekuti rutsigiro mumaforamu rwuchapihwa nenharaunda, nepo rutsigiro rwebhizimusi vhezheni rwakananga. Izvo uye izvo zvavanovimbisa kuti mamwe mabasa anogona kubvunzwa kwavari, chimwe chinhu chandinogona kutaura zvishoma kana kusataura nekuti ini handina kuzviedza uye handizive chero munhu akumbira chero chinhu.
LibreOffice 7.1.3 ikozvino inogona kutorwa kubva ku peji reprojekti repamutemo. Mumazuva mashoma anotevera ichatanga kuoneka pane kumwe kugoverwa kweLinux. Isu tinorangarira kuti iyo vhezheni yakakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira ichiri v7.0.5.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.1.3 yasvika ichigadzirisa zvinopfuura zana bugs
Sony Interactive Varaidzo Inozivisa Investment muDiscord